Taekwondo ITF – amboaran'i Afrika :: Kandidà hampiantrano fifaninanana kaontinantaly i Madagasikara • AoRaha
Taekwondo ITF – amboaran’i Afrika Kandidà hampiantrano fifaninanana kaontinantaly i Madagasikara
Maniry ny hampiantrano ny fiadiana ny amboaran’i Afrika taranja haiady taekwondo ITF, amin’ny taona 2021, i Madaga­sikara. “Tsara toerana isika, raha miohatra amin’ireo firenena hafa mikasa ny handray an’io hetsika iraisam-pirenena io. Tombony ho antsika ny haavo lentan’ny teknika ananan’ireo mpikatroka tao anatin’ny dimy taona lasa. Nazoto nandray anjara tamin’ny fifaninanana iraisam-pirenena ihany koa isika”, hoy Rakotoarisoa Maurice, mpanorina ny fikambanana eto Madagasikara ho an’ny haiady Taekwondo ITF.
Nametraka ny antontan-taratasy filatsahana hofidiana isika, tamin’ny volana oktobra 2019, nandritra ny fiadiana ny amboaran’i Afrika tany Tanzania. I Ouganda sy Sénégal no mpifanandrina amintsika amin’io fampiantranoana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika io.
Amin’ny volana jolay, hanaovana ny hetsika iraisam-pirenena andiany 2020 any Etiopia no hanendrena an’izay firenena hahazo ny fampiantranoana. Firenena fito ambin’ny folo, mpikambana ao amin’ny fikambanana afrika­nan’ ny taekwondo ITF no mifidy izay handray ny andiany 2021.
Fifaninana basket-ball :: Kasaina hatao amin’ny volana mey ny “Smatch’in 2020”
Baolina kitra sy valanaretina :: Mety hiato ireo fifaninanana eoropeana